Meleteriga dowladda iyo ururka Al-shabaab oo maanta dagaal khasaare badan geystay ku galay Bakool – Radio Daljir
Meleteriga dowladda iyo ururka Al-shabaab oo maanta dagaal khasaare badan geystay ku galay Bakool
Agoosto 13, 2013 6:34 b 0
Xudur, Aug 13, 2013 – Waxaa la xaqiijiyey geerida 5 ruux iyo ?20 kale oo dhaawac ah, kadib dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaanka Garas-weyne ee ku dhow degmada Xudur ee Gobolka Bakool, dagaalkaas ayaa u dhexeeyey Al-shabaab iyo ciidamada dowladda.
Marka laga yimaado khasaaraha dagaalka ka dhashay ee soo gaaray labbada dhinac ee Al-shabaab iyo ciidamada dowladda, waxaa jirta dhibaato barakac oo soo gaaray dadka deegaanka tuulada Garas-weyne ee gobolkaasi Bakool.
Maamulka dowladda Federaalka ah ee gobolka Bakool ayaa saxaafada la hadlay waxay sheegeen in ay iyagu dagaalka qaadeen isal markaasna ay gacanta ku dhigeen tuulada oo markii hore ay al-shabaab gacanta ku hayeen, sidaasi waxaa sheegay gudoomiyaha Bakool Maxamed Cabdi Tall.
Gebi ahaanba tuulada ayaa haatan ah meel banaan oo dadkii danyarta deganaa qeybtood ay ka bexeen, waxaana haatan labbada dhinac ka kala fadhiya ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa ururka al-shabaab oo horey gacanta ugu hayey, mase jirto faah-faahin dheeraad oo ka soo baxaysa dhinaca Al-shabaab.
Maamulka Bakool waxay wacad ku mareen in ay ku cel-celin doonaan weerarada ka dhanka ah ururka Al-shabaab ee laga fulinayo meelaha ay ururka ka joogaan gobolkaasi Bakool, gudoomiye Tall wuxuu si cad u qeexay in aysan dagaaladu joogsan doonin.
Baahin: Salaasa, 13- AUG 2013 -Caawa Iyo Daljir Weriye Xaliimo Sacdiya Cabdilaahi Cali~ Daljir ~ Garowe